रणबीर–माहिराको ‘लव बाइट’ भएको तस्बिरको बारेमा पिता ऋषि कपूरले दिए यस्तो घिनलाग्दो बयान | Lifemandu
रणबीर–माहिराको ‘लव बाइट’ भएको तस्बिरको बारेमा पिता ऋषि कपूरले दिए यस्तो घिनलाग्दो बयान
| आइतबार, ८ असोज, २०७४
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता रणबीर कपूरको हालै पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खानसँगको तस्बिर भाइरल भइरहेको छ । उनीहरुलाई सँगै देखिनुले भन्दा पनि अभिनेत्रीको पिठ्युमा देखिएको ‘लव बाइट’ले सबैलाई हैरान बनाइदिएको छ ।
कैटरीनासँग ब्रेकअप भएपछि रणबीर पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खानसँग अफयरमा छन् । तर सधैँ उनी यो सम्बन्धलाई अस्विकार गर्ने गरेका छन् ।
भनिन्छ माया लुकाएर लुक्दैन । यस्तै रणबीरको जीवनमा पनि लागु भएको छ । उनको यस्तो तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ कि चाहे उनले यो सम्बन्धलाई जति नै लुकाएपनि पर्दाफास भएको छ । यी दुई एक अर्कासँग लुकेर डेट गरिरहेका छन् ।
यो तस्बिर त्यस समयको हो जब यहि वर्ष जुलाईमा संजय दत्तको बायोपिक शुटिङको लागि रणबीर कपूर न्युयोर्क गएका थिए । त्यहि समयमा माहिरा खान पनि जुन होटलमा बसेकी थिइन् त्यहाँ रणबीर कपूर उनलाई भेट्न गएका थिए । जब दुवै होटलबाट बाहिरिएका थिए कसैले उनीहरुको तस्बिर कसैले क्यामरामा कैद गरेको थियो ।
तस्विरमा सामाजिक सञ्जालमा आगो जस्तै फैलिरहेको छ । एक तस्बिरमा माहिराको पिठ्युमा लव बाइट देखिएको थियो । साथै दुवै चुरोट तानिरहेका थिए ।
माहिरा खानले बलिउडमा शाहरुख खानको साथमा फिल्म ‘रईस’ मार्फत डेब्यू गरेकी थिइन् ।
यी सबै कुरा थाहा पाएपछि रणबीरका पिता ऋषि कपूरले आफ्नो प्रतिकृया दिएका छन् । उनले दिएको प्रतिकृयाबाट थुप्रै दर्शक रिसाएका छन् भने उनलाइ सामाजिक सञ्जालमा पनि गाली दिइरहेका छन् । उनले उक्त तस्बिरको बारेमा भनेका छन्, ‘मैले बिहानै यो तस्बिर देखेको थिए । जसमा चिन्तित र हैरान हुने कुनै कुरा नै थिएन । त्यसैले यो तस्विर जसको हो उसैसँग कुरा गर्नुस् । मलाई बीचमा पार्ने काम नगर्नुस् ।’
ऋषिले अगाडि भनेका छन्, ‘मैले ती तस्बिर ट्विटरमा मात्र देखे किनकी म ट्विटर मात्र चलाउँछु । अरु सामाजिक सञ्जालहरुमा म छैन । यस तस्बिरमा त्यस्तो केहि छैन । रणबीर युवा स्टार हो र उ अविवाहित पनि । उ जो सुकैसँग पनि भेट्न सक्छ । उसको व्यक्तिगत जीवनमा दखल दिनु राम्रो होइन । म यसबारेमा केहि पनि भन्न सक्दिन किनकी रणबीर युवा हो उसँग जोसुकै सँग नि हिँड्ने अधिकार छ ।’
साथी लिएर ऋषि कपुरलाई कुट्न उनकै घरमा पुगेका थिए संजय दत्त
एजेन्सी । रनवीर कपुर यतिखेर संजय दत्तको बायोपिकमा बन्न लागेको फिल्मको सुटिङमा व्यस्त रहेका छन् । तर, संजय दत्तको भने ऋषि कपुरसँग झगडा परेको थियो । ऋषि कपुरले आफ्नो अटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्लामा केही य
प्रत्येक हप्ता एउटा बच्चाको पिता बन्छन् यी व्यक्ति
एजेन्सी । एक मानिसको ८०० बच्चा कसरी हुनसक्छ ? हरेक हप्ता कसरी कसरी पिता बन्न सक्छ ? यो कुरा सुनेर तपाई अचम्ममा पर्नुभयो होला ? कुरा यस्तो रहेको छ ।
कंगना र रणबीर कपूरको ‘फिजिकल रिलेशनशिप’को बारेमा खुल्यो यस्तो राज
एजेन्सी । अभिनेत्री कंगना रनौत र ऋतिक रोशनको बीचमा भएको विवाद लगातार लम्बिरहेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा यी दुईको एक अर्काप्रति जमेर आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छन् ।